3-da cabbir ee Istaraatiijiyad Suuqgeyn Email oo dheellitiran | Martech Zone
Talaado, Janaayo 26, 2016 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Ganacsato badan ayaa diirada saaraya istiraatiijiyadooda ku saabsan suuqgeynta emaylka si fudud wax soo saarka wax soo saarka iyo waxqabadka emaylka. Tani waxay luminaysaa cabirro aad u waaweyn oo saameyn ku leh guulaha guud ee shirkaddaada si aad ula tartanto sanduuqa la galiyay oo sare loogu qaaday dareenka macaamiishaada.
Waxaa jira cabirro 3 ah oo ku saabsan falanqeyn kasta oo la fuliyo ka dib olole suuqgeyn email ah:
Samatabbixinta emaylka - tani waa haddii iyo in kale e-maylkaagu ku sameeyay sanduuqa. Taasi waa isku-darka nadaafadda liiska emaylkaaga, sumcadda cinwaankaaga dirista IP-ga, ansaxnimada adeeg bixiyaha emaylkaaga (ESP), marka lagu daro waxyaabaha aad soo saarayso. Qeybta hoose - meeqo emaylladaada ah ayaa ku sameeyay sanduuqa, ka fogaanshaha galka qashinka ama isweydaarsiga. Dad badan ayaa ka walwalsan arrintan, gaar ahaan kuwa aan lahayn ESP wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, soo-saaristu waxay ku kici kartaa shirkaddaada inay lumiso cilaaqaadkeedii iyo dakhligeedii. Waxaan isticmaalnaa 250ok ilaa la soco meelaynta sanduuqaaga.
Akhlaaqda Macaamiil - kuwani waa kuwa qaata, ama macaamiisha emailkaaga. Ma fureen? Guji-Guji ama Heer-Dhex-Dheer (CTR)? Beddelaadda? Kuwani waxaa caadi ahaan lagu qiyaasaa tirinta "mid gaar ah". Taasi waa, tirintu waa tan tirada macaamiisha furay, riixay, ama beddelay… inaan lagu qaldin wadarta guud ee furitaanka, gujinta, iyo beddelka. Qayb aad u wanaagsan oo liiskaaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inaysan firfircooneyn - maxaad sameyneysaa si aad dib ula fal gasho?
Waxqabadka Mawduuca emaylka - waa sida ay nuxurkaagu u sameeyeen. Maxay ahaayeen wadarta furitaanka, guji-dhexadka, iyo beddelaadaha? Sidee xiriiriyaashaadu u kala sareeyeen? Miyaad u qaybineysaa mawduucaaga si aad si fiican ugula mid noqoto rukunka? Waxyaabaha si firfircoon loo soo saaray, liistada liistada, iyo shakhsiyeyn dheeraad ah ayaa si ballaaran u hagaajinaya heerarka waxqabadka emaylka.
Markaad horay u socoto, waa inaad isbarbar dhig ku sameysaa waxqabadkaaga ololaha dhamaan cabirradan olole kasta iyo liis kasta ama qeyb kasta. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh ugu dhex gasho halka ay arrimahaagu joogaan!
Tags: istaraatijiyad email oo isku dheellitiranistaraatijiyad dheellitirancabbirEmail Marketingistiraatiijiyadda suuqgeynta emailka